Maraykanka oo hoos u dhigay lacagihii taakulaynta dhanka Milariga Pakistan. – SBC
Maraykanka oo hoos u dhigay lacagihii taakulaynta dhanka Milariga Pakistan.
Dowlada Pakistan ayaa xaqiijisay in Maraykanku uu hoos u dhigay taakulayntii dhaqaale ee uu ku bixin jiray Milatariga Pakistan,kadib markii ay soo bexeen tuhuno Maraykanku uu ka qaaday wada shaqaynta ay Dowlada Paksitan ka leeyihiiin la dagaalanka waxa ay u yaqaanaan Argagixisada.
Sarkaal sare oo ka tirsan Aqalka cad ee dowlada Maraykanka Bill Daley ayaa sheegay in ay jiraan waxyaabo keenay in ay dowlada Maraykanku ay qaadato talaabadan ay dhaqaalaha dhanka Milatariga ay uga jartay Pakistan.
Bill Daley si cad umaanu sheegin sababta dhabta ah ee keentay in Maraykanku Malaayiin doolar oo uu ku bixin jiray taakuladiisa Milatariga Pakistan uu Jaro,hase ahaatee waxaa jira warar sheegaya in Maraykanku uu saluugay howl galada la dagaalanka Al qacida ee ay dowlada Pakistan wado.
Maraykanka ayaa ka Jaray Pakistan 800 Million oo doolar oo kamid ah lacagaha uu ku bixiyo taageerada dhanka Milatariga ah ee uu siiyo Pakistan.
Wixii ka dambeeyay dilkii Sheekh Usama Bin ladin Maraykanku waxaa uu si cad u dhaliil sanaa Howl galada ay dowlada Pakistan kula dagaalamayso Al qacido iyo Daalibaan.
Saraakiil ka tirsan Dowlada Maraykanka ayaa horay u sheegay in uu jiro tuhun ku aadan in madax sarsare oo dhanka Ciidanka Pakistan ah ay la shaqeeyaan Daalibaanka iyo Alqacida,iyadoona keentay sida ay aamin san yihiin in Usama mudo kunoolaado dalkaasi kahor dilkiisa.